Diyopost.com :: यस्तो छ रसियामा जारी विश्वकप महाकूम्भमा खेलिने ‘फूटबल ’को रहस्य ! यस्तो छ रसियामा जारी विश्वकप महाकूम्भमा खेलिने ‘फूटबल ’को रहस्य ! - Diyopost.com
काठमाडौँ । हरेक विश्वकप खेलमा केही न केही प्राविधिक विषय परिवर्तन गरिएकै हुन्छ । विश्वकप फुटबलमा सबैभन्दा प्रभाव पार्ने सामाग्री मध्ये एक हो –बल । बल बिना फूटबल नै हुँदैन । त्यही बल नै कस्तो हुन्छ भन्ने कौतुहुलता हुनु स्वभाविक नै हो । विश्वकै महँगो मानिएको फूटबल प्रतियोगिताका लागि ‘बल’ पनि निकै गुणस्तरीय नै चाहिन्छ नै ।
हरेक सिजनमा कुन बल खेलाईने भन्ने बारेमा फिफाले नै निर्णय लिने गरेको छ । यहाँ हामीले अहिलेसम्मको विश्वकपमा कुनकुन बल खेलाईयो भनेर केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।
रसिया – विश्वकप २०१८
रसियामा जारी विश्वकप २०१८ अडिडासका बलहरु खेलाईएको छ । अडिडास मेचा र अडिडास टल्सटार १८ गरि २ प्रकृतिका बलहरु हालको विश्वकपमा खेलाईएको छ । अडिडास टल्सटरकै अर्को फर्मको रुपमा मेचा प्रयोग गरिएको हो । मेचा हालको विश्वकपमा नक आउट चरण सम्म खेलाईएको छ भने क्वाटरफाईनल देखी अन्तिम खेलहरुमा एडिडास टल्सटर खेलाईने छ । सेमीफाईनलसम्म खेलाई सकिएको अवस्थामा फाईनल खेलको लागि एडिडासले अर्कै बल उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । विश्वकपमा हाल प्रयोग भईरहेको बल आधुनिक तरिकाले उत्पादन गरिएको छ । यसमा प्रयोग भएका सम्पुर्ण सामाग्रीहरु गुणस्तरिय रहेको एडिडासले यसअघि नै बताईसकेको छ ।
ब्राजिल– विश्वकप २०१४
सन् २०१४ को विश्वकपाम एडिडास ब्राजुका नामक बल प्रयोग गरिएको थियो । ब्राजुका ब्राजिलको राष्ट्रिय गौरव र जीवनको रुपमा ब्राजुकालाई डिजाईन गरिएको हो । ब्राजुकाले ब्राजिलियनहरुको जीवनशैली र अमेजोन नदीको सभ्यतालाई प्रतिनिधित्व गरेको बताईन्छ । उक्त बललाई डिजाईन गर्नको लागी मात्र एडिडास कम्पनीले साँढे २ वर्ष खर्चिएको थियो । एडिडासले अहिलेसम्म उत्पादन गरेको बलमध्य सबैभन्दा बढी प्रविधिहरुको प्रयोग ब्राजुकामा गरिएको छ । उत्पादन समय र उत्पादन पश्चात सबैभन्दा धेरैपटक परिक्षण समेत गरिसकेपछि विश्वकप २०१४ मा खेलाईएको थियो ।
सेमिफाईनलसम्म एडिडास ब्राजुका खेलाईएपनि अन्तिम अर्थात फाईनल खेलमा भने एडिडास ब्राजुका फाईनल रियो नामक बल खेलाईएको थियो । उहि किसिमको प्रविधि र गुणस्तरीय सामाग्री प्रयोग गरिएको फाईनल रियो र ब्राजुकाबिच रङको मात्र फरक रहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिका – विश्वकप २०१०
सन २०१० को विश्वकपमा एडिडासले जाबुलानी र जोवुलानी नामका दुई बललाई विश्वकपमा खेलाइने हेतुले उत्पादन गरेको थियो । अन्य बलहरुको तुलनामा जावुलानीको डिजाईन केही आकर्षक थियो । खेलमा एक टिमको तर्फबाट कुल ११ जना हुने भएकाले बलमा पनि एघार रङकै प्रयोग गरिएको थियो । यसको अलवा उक्त एघार रङले दक्षिण अफ्रिकाको एघार समुदाय र एघार प्रमुख भाषाहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । अफ्रिकी जुलु भाषाका अनुसार जावुलानीको अर्थ उत्सव हो ।
दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपको सेमिफाईनलसम्म एडिडास जावुलानीको प्रयोग गरिएतापनी फाइनलमा भने एक विशेष संस्करणको रुपमा एडिडासले जोवुलानीको उत्पादन गरेको थियो । जोवुलानीले दक्षिण अप्रिmकाको जेहान्सवर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र उक्त बल वरपर लगाईएको सुनौलो रङले जेहान्सवर्गलाई सुनौलो शहरका रुपमा चिनाउने प्रतिक रहेको बताईन्छ ।
जर्मनी – विश्वकप २००६
जर्मनीमा भएको विश्वकप २००६का लागी एडिडासले एक उत्कृष्ठ प्रविधि र डिजाईनहरु प्रयोग बल उत्पादन गरेको थियो । एडिडासका अनुसार त्यसअघिका विश्वकपमा खेलाईने बलहरु भन्दा गुणस्तरिय रहेको बताएका थिए । २००६ को विश्वकपमा पविन २ वटा बलको प्रयोग गरिएको थियो जसलाई एडिडासले टिमजिस्ट र टिमजिस्ट वर्लिन नाम दिएको थियो । बलमा प्रयोग गरिएको डिजाईनले जर्मन फुटबल सफलतालाई इंगित गरेको एडिडासले बताएको थियो । २००६ देखी विश्वकपमा दुईवटा बलको प्रयोग गर्न शुरु गरिएको थियो । खेलको शुरुवात एडिडास टिमजिस्टको प्रयोग गरिएपछि एडिडासले फाईनल खेलको लागी विशेष तबरले टिमजिस्ट वर्लिन नामक बलको प्रयोग गरिएको होे ।
दक्षिण कोरिया, जापान – विश्वकप २००२
सन २००२ को विश्वकप दुई देशहरुमा भएको थियो । दुई देशहरु दक्षिण कोरिया र जापानमा एउटै बलको प्रयोग गरिएको थियो । एडिडास फेभरनोवा नाम दिईएको छ ।
उक्त बलको वाहीरि लेयर र भित्रि भागमा उत्कृष्ट खालको रुईको प्रयोग गरिएको थियो । यद्यपी यस बललाई लिएर विश्वकप २००२ मा केही विवादहरु आएका थिए ।
फ्रान्स – विश्वकप १९९८
सन १९९८ को विश्वकपमा एडिडासले एडिडास ट्रिकलर नामक बल उत्पादन गरेको थियो जसको वाहिरी डिजाईनमा तिनवटा रङहरुको समिश्रण गरिएको थियो । निलो रङले फ्रान्सको झण्डालाई इंगित गथ्र्यो भने अन्य रङले पुरा फ्रान्सेली जनता र फ्रान्सको ऐतिहासिक फुटबल संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरि डिजाईन गरिएको थियो ।